Guryo ku yaala Malmö oo xalay saq dhexe la xabadeeyey | Somaliska
Xalay saq dhexe ayaa dhismo yaal ku yaala magaaladda Malmö ee caasimadda seddexaad waxaa lala beegsaday xabado. Dhismo yaalkan oo ka koobnaa sagaal dabaq ayaa qaar ka mid ah waxaa gaaray rasaasta xabadaha la furay.
Xabadahan ayaan la ogeeyn jiho ay ka yimaadeen ama cida loola dan lahaa oo dhismeyaashaas mid ka mid ah degan. Sidaas waxaa sheegay Magnus Lefever. Booliska ayaa xalay oo dhan baaritaan ka hayey mana jirto cid fallkaas lala xirriiriyey hase ahaatee waxaa ay sheegeen ineey isha ku hayaan cidda la oran karo waa ku suganaa halkaas oo la soo bar tilmaameedsaday.
Mudooyinkii u dambeeyey Malmö waxaa aad ugu soo badanaya xabadaha lala beegsanayo shaqsiyaad,waxaana boolisku runsan yahay in salka ay ku heeyso dagaalo u dhaxeeyo kooxaha ku lug leh maandooriyaha iyo falal dambiyeedka.